Maxaa ka jira in General Indhacadde uu weeraray Saldhigga Waaberi? | Dhacdo
Home Wararka Maanta Maxaa ka jira in General Indhacadde uu weeraray Saldhigga Waaberi?
Maxaa ka jira in General Indhacadde uu weeraray Saldhigga Waaberi?
Waxaa saacadihii ugu dambeeyay barraha bulshada leesla dhex marayay warar sheegaya in General Yuusuf Maxamed Siyaad (Indhacadde) uu weeraray Saldhigga Booliska ee Degmada Waaberi ee Gobolka Banaadir.
Ciidan uu horkacayay General Yuusuf Maxamed Siyaad ayaa fiidnimadii xalay tagay Saldhigga Booliska ee Waaberi, si looga soo sii daayo hablo dhalinyaro ah oo ciidmaada ay soo xireen.
Gabdhahan oo ay ehel yihiin jananka ayaa ka mid ahaa bannaanbaxayaal Jimcihii lagu qabqabtay agagaarka Isgoyska Banaadir ee Degmada Hodan, xilli ay ka wadeen bannaanbax ka dhan ah Dowladda Federaalka.
Taggitaanka uu jananku tagay saldhiggaasi ayay dadka qaarkii u fasirteen mid uu ku weeraray halkaasi, inkastoo uu jananku ka carooday qaab guracan oo lagu soo xiray gabdhaha ay ehelka yihiin, isla-markaana ay ciidamadiisii muddo kooban xireen wadada. Xaaladda ayaana caadi ku soo laabatay, wadahadalo ka dib.
Nin xirnaa dharka shibilka, kuna hubeysnaa bastoolad ayaa madaxa ka saaray gabdhahaasi oo Wariye-yaal ay ku jiraan, isagoona ka dalbaday ciidamada ammaanka inay xabsiga u kaxeeyan. Ma cadda waxa uu ninkaasi yahay, waxaase jira warar sheegaya in uu ka mid yahay Ciidamada Dharcadka ee Dowladda Federaalka.
Wararka ayaa sheegaya in General Indhacadde uu saldhiggaasi ka soo sii daayay saddex gabdho oo adeer uu u yahay, kana mid ahaa bannaanbaxayaashii lagu qabqabtay nawaaxiga Isgoyska Banaadir.
Dhanka kale General Yuusuf Maxamed Siyaad (Indhacadde) oo arrintaasi ka hadlay ayaa beeniyay inuu weeraray Saldhigga Booliska ee Degmada Waaberi, isla-markaana aysan ciidamadiisa la wareegin saldhiggaasi.
General Indhacadde oo la hadlay Radio Kulmiye ayaa sheegay in aanay ka suuroobin been abuurka laga faafiyay, balse uu saldhiggaasi u tagay dad ay ehel yihiin oo lagu soo xiray.
General Indhacadde oo horaan ay isku wanaagsanaayeen Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Taliyaha NISA, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaad mooddaa inaanu xiriirkooda ahayn, sidii hore.
Previous articleAbukaate Sakariye oo sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu sharciga jebiyay
Next articleNabadoon goor dhaw lagu toogtay Muqdisho